Ngaphezu kwengxenye yesithathu yabaseRussia abaneminyaka engama-18 no-60 bakholelwa ukuthi ukuba nemali eyanele emndenini kubaluleke kakhulu ekulondolozeni kunokuqonda ngocansi.
Ngokuvamile kuwo wonke umndeni, kungakhathaliseki ukuthi ubudlelwane obuhle bubizwa kanjani, ngothando nangenhlonipho, kuvame ukungqubuzana ngokuthi ungasebenzisa kanjani imali. Ezinye imibhangqwana ziphikisana ngezinto ezingabalulekile, ezinye izingxabano zezezimali zinikeza isizathu sokubuza ukuthi ubani ophethe futhi okufanele abe yisinqumo. Isimo sengqondo semali sisebenza njengesilingo se-litmus, sibonisa ukungavumelani okufihliwe phakathi kwalabo abashadile. Akuyona imfihlo ukuthi lowo otholayo ngaphezulu, ukholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi unqume ukuthi ungubani, kuphi nokuthi yini ongayisebenzisa imali. Futhi ngasikhathi sinye ushiya igama lokugcina ngokwalo kunoma yiziphi izimo eziphikisanayo.
Isimo sengqondo esithile semali, nendlela yokwabelana ngale ndima emndenini - isungulwa ebuntwaneni. Izingane zibuka ngentshisekelo indlela abazali bazo abaxazulula ngayo izinkinga zezezimali. Ekuphileni komuntu omdala, bazokopisha isibonelo sabazali, noma bazama ukwenza konke okuphambene nalokho. Uma sekutholiwe, imibono ingase ingahambisani nombhangqwana oshadile, okubandakanya ukwehluleka ebuhlotsheni obuphelele. Izingqondo eziningi ezihlukene ngemali zingonakalisa umshado, ngoba lo mbuzo, ngandlela-thile, uhlobene nazo zonke izici zokuphila komndeni.
Njengomthetho, ngendlela umuntu aphatha ngayo imali, umuntu angacabanga ngezici ezithile zobuntu bakhe. Bonke abantu bangahle bahlukaniswe ngokwezimo ngezigaba eziningana ngokwezinga elithi "uthando" lwemali.
Ama-tranfers noma izisusa. Ngokuvamile kunzima ngabo ukuba balwe, ukuze bangachithi konke ku-penny. Laba bantu bavame ukuthenga okungenangqondo. Zilandele: ingabe kukhona phakathi kwezinto ozithengile, lezo owawuyizo, akudingeki neze. Uma kukhona, khona-ke imali yaxoshwa nguwe, futhi kufanele ucabange futhi uhlaziye izihloko zezindleko zakho. Kufanele wazi - naphezu komkhuba wokuthungatha ngemali - lokhu kungasetshenziswa. Iya ezitolo ngehlu lokuthenga okuzokwenza; thatha nawe kuphela inani elithile; Ungasheshi ukuthenga ngesikhathi esisodwa - hambani, cabanga, mhlawumbe le nto ayidingi kakhulu. Mhlawumbe kunengqondo ukuguqula isabelomali kumndeni wakho kumlingani wakho.
Abaqashi noma abahlukumezayo, ngokuphambene nalokho, bazama njalo ukusindisa kukho konke, ukukhawulela hhayi kuphela bona, kodwa futhi nabo. Ngesikhathi esifanayo baqondiswa izici ezihlukahlukene. Omunye uhlehlisa i-postpones "ngosuku oluluhlaza," omunye uqondiswa yisifiso sokugcina imali yokuthenga into enkulu yezinto ezibiza kakhulu, noma ukufakwa okuqinile kusukela ebuntwaneni ukuthi ngezinye izikhathi akuxhunyiwe nezinkinga zempahla. Eqinisweni, akukho lutho olwesabekayo lapha, kodwa kuze kube yilapho lo mkhuba ungashiyi insimu yokucabangela, awuphenduke waba mania, futhi ikuvumela ukuba uhambe ngendlela evamile. Uma ukuqongeleka kusongela ukuba yinto yakho yesibili futhi kudlulela ngaphezu kwemingcele evumelekile - ukulwa. Ungakwazi, isibonelo, ukuchitha wena noma othandekayo bakho ngaphezu kokuvamile.
Ukungathembeki - lena enye iqembu labantu abangazange bathemba oshade naye, benze "stash", noma bafihle ezinye zezimali zabo. Njengomthetho, uyaziwa - ngokushesha noma kamuva, futhi kuholela ekuxabaneni. Isimo esinjalo singasiza kuphela iresiphi eyodwa - ukwethemba. Yakha ubudlelwane obethembayo emndenini, khona-ke ngeke ube nesizathu sokufihla noma yini. Lesi seluleko sisezingeni eliphezulu kuzo zonke izimo: zama ukuxoxa nganoma yiziphi izinkinga zezezimali emndenini, thola indlela evamile yokusabalalisa imali, hamba ukuyekethisa.
Njengoba uzuze ukuqonda okufanayo kulolu daba oluyisisekelo, ungathembela emshadweni oqinile.
Yimuphi uhlobo lwabesifazane abathanda bonke abantu?
Ukunikela okukhulu ngenxa yokufeza okufunayo
Indlela abesifazane abafunde ngayo ukuhamba emkhathini
Indlela yokuziphatha nentombazane, uma insizwa iphakamisa isandla sayo?
Imfihlo yokuphumelela empilweni yabesifazane besigaba "seBalzac"
Strawberry nge-cottage ushizi
Kanjani masinyane ukubala uthando ngokubala?
Pizza "Ngenkampani yomuntu"
I-rosemary ekhulayo ekamelweni
Umfana akathandeki kunoma yini. Yini okufanele ngiyenze?
Ukudla okusheshayo ekhaya - ama-pancake amnandi, izindlela zokupheka ezinhle kakhulu ngesithombe
Izinhlobo zemidlalo, kuye ngokuthi uphawu lwe-zodiac
I-Mantras yokuheha imali: umbhalo
Uyazi kanjani: uthando noma inkohliso?
Ulwandle: izinkomba zokusetshenziswa